Page3– popin
အနမ်းမိုးတွေရွာရင်း တံတားပေါ်က အားလွန်ပြုတ်ကျတဲ့ စုံတွဲရဲ့အဖြစ်ဆိုး(ရုပ်​သံ)
မေ သတင်း လေး /August 8, 2019
ပီရူးနိုင်ငံက စုံတွဲတစ်တွဲဟာ တံတားတစ်ခုပေါ်မှာ အနမ်းတွေဖလှယ်ခဲ့ရာ၊ အားလွန်ပြုတ်ကျပြီး နှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူတို နာမည်တွေကတော့ Maybeth Espinoz (၃၄)နှစ်နဲ့၊ Hector Vidal (၃၆)နှစ်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ Cusco မြို့က Bethlehem တံတားမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့စုံတွဲဟာ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို အပြည့်အဝ ဖော်ကျူးဖို့ အနမ်းတွေ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Maybeth ဟာ အမျိုးသမီးတို့ ထုံးစံအတိုင်း ချစ်သူကို ကားယားခွထားပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်တဲ့အခါမှာ နှစ်ဦးစလုံး အောက်ကို ပြုတ်ကျသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ မနက် (၁)နာရီမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တံတားက ကုန်းကျော်တံတားဖြစ်ပုံရပြီး၊ အောက်မှာ ကားတွေ သွားလာနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒေသသတင်းစာတစ်စောင်မှာတော့ သူတို့စုံတွဲဟာ မနက်ပိုင်း Continue Reading →
( ၆ )ကြိမ်မြောက်( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်တွေ့ပြီ
( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်ပါလက်ပံလှကျေးရွာ ဟင်္သာတမြို့ ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်ပါလက်ပံလှကျေးရွာ ဟင်္သာတမြို့ ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်ပါလက်ပံလှကျေးရွာ ဟင်္သာတမြို့ ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်ပါလက်ပံလှကျေးရွာ ဟင်္သာတမြို့ ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ ( သိန်းတစ်သောင်းခွဲ )မဟာကံထူးရှင်ပါလက်ပံလှကျေးရွာ ဟင်္သာတမြို့ ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။( ၆ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်း ၁၅၀၀၀’ Continue Reading →
YBS ပေါ်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်ထက် ပိုကြမ်းပြလိုက်တဲ့ အမတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခု
မေ သတင်း လေး /August 7, 2019
ကား​ပေါ်မှာ ကိုယ်​ကလည်း သီချင်းနား​ထောင်​ရင်း စီးလာတာ​ပေါ့. တမှတ်​တိုင်​​လောက်​​မောင်​အပြီးမှာ ​ဘေးကအ​ဒေါ်ကြီးက ကိုယ်​ကိုင်​ထားတဲ့ဖုန်းကို​တောင်းပါတယ်​ သူ့ကို​ပေးပါတဲ့ မ​ပေးရင်​ တခုခုလုပ်​လိုက်​မယ်​ဆိုပြီး​ပြောလာပါတယ်​.. ​နောက်​ပြီးကိုယ့်​​ဘေးက​နေရာလွတ်​မှာပဲဝင်​ထိုင်​တယ်​ ကား​ပေါ်မှာ လူကလည်းနည်း စပါယ်​ယာလည်းမပါ ယာဉ်​​မောင်းတ​ယောက်​ပဲ Cctv နဲ့အ​နောက်​တံခါးကိုကြည့်​ပြီး တမှတ်​တိုင်​​ရောက်​တခါတံခါးဖွင့်​စနစ်​နဲ့​မောင်းလာတယ်​အဲ့လိုကား​ပေါ်မှာ ကိုယ်​ကလည်း သီချင်းနား​ထောင်​ရင်း စီးလာတာ​ပေါ့. တမှတ်​တိုင်​​လောက်​​မောင်​အပြီးမှာ ​ဘေးကအ​ဒေါ်ကြီးက ကိုယ်​ကိုင်​ထားတဲ့ဖုန်းကို​တောင်းပါတယ်​ သူ့ကို​ပေးပါတဲ့ မ​ပေးရင်​ တခုခုလုပ်​လိုက်​မယ်​ဆိုပြီး​ပြောလာပါတယ်​.. ပထမ​တော့ကိုယ်​လည်း​ကြောင်​​တောင်​​တောင်​ဖြစ်​သွားတာ​ပေါ့ ဖုန်းငှါးဆက်​ဖို့လား ဘာလား​ပေါ့ ပြီး​တော့ မှာ ကိုယ့်​ခါးနားမှာခဲတဲချွန်​တဲ့ဓား​လေးနဲ့ ခြိမ်း​ခြောက်​​နေတယ်​..ဘုရားစူးတကယ်​​ကြောက်​သွားပါတယ်​ ရင်​လည်း​တော်​​တော်​တုန်​​နေပါပြီ.. Cctv မြင်​သာ​အောင်​ တခုခုလုပ်​ပြချင်​​ပေမယ့်​ သူ့ဓား​လေးကို​ကြောက်​မိပါတယ်​ချက်​ချင်းအကြံထုပ်​တယ်​ ဘာလုပ်​ရမလဲ​ပေါ့ ပြီး​တော့အကြံရသွားတယ်​ ကိုယ်​သင်​တန်းသွာွး​ရင်​သယ်​သွားတဲ့ ပိတ်​စညှပ်​ကပ်​​ကြေးက အိပ်​ထဲအမြဲပါပါ​နေတာသတိရသွားတယ်​ ခပ်​တည်​တည်​နဲ့ဇစ်​ကိုဆွဲပြီး ကပ်​​ကြးထုပ်​ပြလိုက်​ပြီး. အန်​တီဓားထက်​ ကြီးတယ်​ အန်​တီ့လက်​ကအရိုး​တွေပါဖြတ်​ပြစ်​လိုရ့တယ်​ အူ​ကြောင်​ကြားလာမလုပ်​နဲ့ လို့ မျက်​လုံးကိုတည်​ကြည့်​ပြီး ​ပြောလိုက်​မိပါတယ်​. တကယ်​​တော့မျက်​ရည်​၀ဲ​နေတာကိုယ်​ပါ.. အဲ့​တော့မှ Continue Reading →
မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးရဲ့ လက်ရှိ ရေမြုပ်နေတဲ့ အခြေအနေ
ဒီနေ့ ကိုယ်တွေရဲ့ မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံ အခြေအနေ တလောက လေယာဉ်ဘီးချော်စဉ်က လူနာတွေကို ဒီလို ဘာ facility မှမရှိတဲ့ ဆေးရုံမျိူးမှာ မထားနဲ့၊ ချက်ချင်း အာယုကိုပြောင်း ဆိုပြီး အားချင်းပြောင်းဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာကို သတိရတော့ လူကြီးဆိုတာ တယ်အမျှော်အမြင်ကြီးတာပဲ လို့ စိတ်ထဲမှတ်ရတယ်။ ဒါတောင် ကွီးဖြိုး တွေ့သွားတုန်းက ခုလိုရေမြုပ်ရာသီမဟုတ်သေးဘူး၊ ဒါမျိူးသာကွီးဖြိုးတွေ့ရင် ဘာပြောမလဲမသိဘူး။ သေချာတာတော့ သူ့ foreigners တွေကို ဆေးရုံထဲတောင် ပေးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘွတ်ဖိနပ်တွေနဲ့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ရေပုပ်တွေကြားထဲ သွားလာပြီးလူနာကြည့်တယ်နော် ၊ transformer ပုံးနားထိရေကထိနေပြီ၊ ward ထဲက အကိုက main လာချပေးဖို့ပြောတော့ လွတ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီး မိန်းမချပေးလို့ တစ်နာရီလောက် ဘယ်အချက်ဓာတ်လိုက်မလဲဆိုပြီး အသက်ဖက်နဲ့ထုပ်နေရတဲ့ အချိန်အကြောင်းမပြောသေးဘူး။ သေတော့လဲ ပြီးတာပေါ့၊ ဆရာဝန်မလေးတွေသနားပါတယ်ဆိုပြီး Continue Reading →
မနက်စာ ထမင်းကြော်တပွဲကို ၇၀၀၀ တောင်းတဲ့ မကွေးကားကွင်းနားက ရိုက်စားဆိုင်
ဝင်စားလို့ ရတယ်ပြောတဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို ဝင်စားကြည့်လိုက်တော့..(မကွေးကိုလာမယ့်သူများ သတိထားပါ) မ​ကွေးကိုလာမဲ့ မိတ်​​ဆွေးများသတိထားကြပါ။ မ​ကွေးကားကွင်း အ​ဝေရာလမ်းဘက်​ကို ထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​ ​ကောင်းမွန်​​ဆေးရုံဘက်​ကိုထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​​ပေါ့ ​ အ​ပေါက်​အထွက်​မှာ ကပ်​လျှက်​က စား​သောက်​ဆိုင်​ ​ရွှေနန်း​တော်​တည်းခိုခန်းနဲ့ တွဲဖွင့်​ထားတဲ့ဆိုင်​ အဝါ​ရောင်​logo ​လေး​တွေနဲ့ဝင်​စားလို့ ရတယ်​​လေ ဝင်​တည်းလို့ ရတယ်​​လေနဲ့ ​ခေါ်တယ်​။ ဒီ​နေ့ မနက်​ဝင်​စားမိတယ်​ ထမင်း​ကြော် ကိုယ်​က ကားကွင်းနားက ဆိုင်​​တွေသိပ်​မယုံလို့ ​ဈေးအရင်​​မေးမိတယ်​ သူက ၅၀၀ တဲ့ထမင်း​ကြော် ကြက်​သား ဆိတ်​သား အမဲသား ဘာစားမလဲ​မေးလို့ ကြက်​သားနဲ့ လို့ ​ပြောလိုက်​တယ်​ ကြက်​သားကို ​ဈေးမ​မေးမိဘူး​ ကျွန်​​တော်​ကလဲ။ ခန​နေ ပန်းကန်​​လေး​ပေါ်မှာကြက်​သား လက်​တစ်​ဆစ်​​လောက်​ ၅ တုံး​ ခရမ်းချဉ်​သီး ပါးပါးလှီးထားတာ​လေး​တွေ​ရောပါ​သေး ကိုယ်​စစားပီ​ပေါ့ စားပွဲထိုး​ကောင်​မ​လေးကို ကြက်​သား​ကြော်​က Continue Reading →
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုလ်တု Myanmar Sat2ကို ယနေ့ မနက် (၂)နာရီ တွင် အောင်မြင်စွာ လွှတ်တင် ( ရုပ်သံ )
မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး နက်ဝပ်ခ်များအတွက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ကောင်းမွန်လာမည်ဟု ပြောဆိုထားသည့် Intelsat 39 ကို မြန်မာစံတော်ချိန် ဩဂုတ် ၇ ရက်၊ နံနက် နှစ်နာရီတွင် လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဂြိုဟ်တုကို လွှတ်တင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများ၏ မြန်နှုန်းများကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မည့်အပြင် အာဖရိကတိုက်၊ ဥရောပတိုက်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် အာရှတိုက်တစ်ခွင်၌ မြန်နှုန်းမြှင့် ဗီဒီယိုဖြန့်ချိရေးဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာ နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနဘက်မှ ပြောဆိုထားသည်။ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Arianespac ၏ တောင်အမေရိကတိုက်၏ ပြင်သစ်ဂီယာနာ (French Guiana)ရှိ အာရိယန် အာကာသဒုံးပျံပစ်လွှတ်ရေး အခြေစိုက်စခန်း (Ariane Space Launch Base)မှ ဂြိုဟ်တု Continue Reading →
ယနေ့ ပြန်တက်လာတဲ့ ဘုရားပေါ်က ခွေးဇာတ်ခင်းနေတဲ့ ပုံတွေပါ
ယနေ့ ပြန်တက်လာတဲ့ ဘုရားပေါ်က ခွေးဇာတ်ခင်းနေတဲ့ ပုံတွေပါ။ ပုံပါ လူငယ်စုံတွဲကို သိက္ခာကျလိုစိတ် လုံးဝမရှိပေမယ့် ခေတ်သစ်လူငယ်တိုင်း ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို မလုပ်သင့်ကြောင်း သိစေချင်သော ဆန္ဒဖြင့် တင်ပြေးလိုက်ပါသည်။
သူများကိုကယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန် ကိုယ့်အိမ်မှာရေကြီးနေပြီဆိုတဲ့ ဝေဠုကျော်
ဝေဠုကျော်တစ်ယောက် မိုးတွေရွာ ရေတွေကြီးလို့ သူ့အိမ်ထဲတောင် ရေတွေ ဝင်နေပါပြီတဲ့။ ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့ရပြောင်းရလို့ တစ်ယောက်တည်းတောင် မနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ‘’ကယ်ကြပါအုံးဗျို့။ သူများတွေအတွက် ကူဖို့ ကယ်ဖို့ အတွက် သွားဖို့ ပြင်ဆင်တုန်း ကိုယ့်အိမ်ပါ ရေ တက်လာလို့ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ပို့နေရပါတယ် ကူကြ ကယ်ကြ ပါအုံးဗျို့။ WLK လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ အမြန်ဆုံးလာပေးပါ’’ ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျမှာ သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ်က ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ အပြောင်းအရွှေ့လုပ်နေတဲ့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အတူတွဲတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဝေဠုကျော်က ပရိသတ်တွေ လေးစားအားကျရတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ်ကစပြီး လူမှု အကျိုးပြုအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ Continue Reading →
မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး 3D ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ ကြီးမြတ်သောမြန်မာ (ရုပ်သံ)
မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး 3D ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ ကြီးမြတ်သောမြန်မာ (ရုပ်သံ) ခေတ်တွေလည်း ပြောင်းလာတာနဲ့ အမျှ မြန်မာနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ကြည့်ချင်နေကြမှာအမှန်ပါပဲ။ ယခုနောက်ပိုင်း ၁ နှစ် ၂ နှစ်အတွင်းမှာတော့ လူငယ်ဒါရိုက်တာ အသစ်တွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အဆင့်အတန်းတခုရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း တခုခုဆို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကို မျှော်လင့်နေကြတာ အမှန်ပါပဲ။ မြန်မာရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်တွေ စောင့်စားရကျိုးနပ်စေမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားကတော့ မကြာခင် ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြီးမြတ်လှသော သမိုင်းကြောင်းကြီးကို ရိုက်ထားတဲ့ “ကြီးမြတ်သော မြန်မာ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ မကြာခင် ရုံတင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Continue Reading →
မိတ္ထီလာက ပရိတ်သတ် အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ကြတဲ့ စူးရှထက်ရဲ့ အလန်းစားသီဆိုမှု
မိတ္ထီလာက ပရိတ်သတ် အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ကြတဲ့ စူးရှထက်ရဲ့ အလန်းစားသီဆိုမှု ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အမိုက်စားနဲ့ မော်ဒယ် တယောက်ဖြစ်တဲ့ စူးရှထက်ကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်ကိုင်ပြီး အလှူဒါနလေးတွေ ပြုလုပ်နေတာကြောင့် ဝေဖန်သူတွေတော့ တဖြည်းဖြည်းနည်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။မော်ဒယ် စူးရှထက်ကတော့ အဆိုတော် အစ္စဏီကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလာကြတာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ စူးရှထက်ကို မသိတဲ့သူ မရှိလောက်တော့ပါဘူး။ စူးရှထက်ကတော့ တဖက်မှာမိဘကို လုပ်ကျွေးနေသလို တယောက်ထဲ ရုန်းကန်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။လူသိများလာတဲ့ အလျောက် စူးရှထက်ကတော့ နယ်ကပွဲတွေမှာ သီချင်းတွေဆိုနေရပြီး တချို့ပွဲတွေကိုလည်း တတ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ စူးရှထက်ရဲ့ ဗီဒိယိုလေးရှိပါတယ်။စူးရှထက်ကတော့ မိတ္ထီလာမှာသွားရောက်ဖျော်ဖြေတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့ကိုအားပေးဝန်းရံတဲ့ သူတွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်နေတာ Continue Reading →